News Collection: यस्तो अवस्थामा म के गरूँ ?
यस्तो अवस्थामा म के गरूँ ?
म एकल महिला हुँ। मेरो ३ वर्षको एउटा छोरा छ। ६ महिना भन्दा बढी समयदेखि म एक युवकको सम्पर्कमा छु। हामी एक अर्कालाई माया गर्छौं र विवाहसमेत गर्न चाहन्छौं। उसको परिवारले मलाई बुहारी बनाउने सपना देखिसकेको छ। मेरै लागि भनेर उक्त युवकले अरूसँग हुन लागेको आफ्नो विवाहलाई अस्वीकार गरेको थियो, तर उसलाई म एकल महिला भएको यथार्थ थाहा छैन। बताऊँ भने सम्बन्ध टुट्ने डर छ। यस्तो अवस्थामा म के गरूँ ?
तपाईं वास्तवमै जीवनको त्यस्तो मोडमा हुनुहुन्छ जहाँ गरिएको एउटा सानो भुलले तपाईंलाई नर्कको यातना दिन सक्छ भने सहि निर्णयले स्वर्गको आनन्द। तपाईं जस्तै एकल महिलाहरूको हितका लागि काम गर्ने थुप्रै सामाजिक संघ संस्थाको सहयोग तथा कानुनी उपचारहरू उपलब्ध छन्। ती माध्यमहरूबाट पनि सल्लाह र सहयोग लिनु तपाईंको हितमा हुनेछ। जहाँसम्म तपाईंलाई मैले दिने सल्लाह छ, म के भन्छु भन्ने आफ्ना बारेमा मात्र नसोचेर आफ्नो छोराको भविष्य पनि सोच्दै ती युवक र तिनको परिवारलाई आफ्नो वर्तमान स्थितिका बारेमा कुनै पनि कुरा नलुकाई खुलस्त बताइदिनु तपाईंकै हितमा हुनेछ। यदि ती युवक र उनको परिवारले वास्तवमै तपाईंलाई माया गर्छन भने तपाईंको अतितलाई उनीहरू बिर्सन तयार हुनेछन् र तपाईंको छोरालाई समेत स्वीकार गर्नेछन्। होइन, उनीहरूले तपाईंलाई अविवाहित युवतीनै मानेका छन् र तपाईंलाई अविवाहित युवतीकै रूपमा मात्र स्वीकार गर्ने मनस्थिति बनाएका छन् भने तपाईंले फरक बाटो रोज्नुपर्छ, किनभने प्रश्न तपाईंको मात्र नभै तपाईंको छोराको भविष्यको पनि छ, तसर्थ सम्बन्ध टुट्ने डर वा त्रासले कुरा लुकाउनु तपाईंको हितमा हुन सक्दैन।